Shiinaha Daad-galka Dheddigga PVC Nooca Suuxdinta Suuq-geynta iyo alaab-qeybiyeyaasha. Biotek
Xeerka alaabta: BOT 123000
Codsi: sameynta iyo dayactirka marin-haweedka xaaladaha deg-degga ah.
Model: joogto ah iyo wareeg
Cabir: cabir 1, cabir 2, cabir 3, cabir 4, cabir 5, cabir 6
Maaskarada wajiga ee 'PVC' waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo hawo-mareenada otomaatiga ah iyo dib-u-kiciyaha gacanta.
Isweydaarsiga balaastigga ah ee hagaajinta naasaha
Qolof cad oo kormeer ah
Barkin jilicsan oo loogu talagalay ku habboon wejiga
1. Bilaash Latex, u hoggaansanaanta shuruudaha heerka ISO
2. Ka samaysan qalab caddad caafimaad oo fudud oo jilicsan, oo ku habboon u fiirsasho;
3. Barkinta hawadu waxay hubisaa in wejiguna ku habboon yahay, oo aan daadasho lahayn;
4. Cabbirro kala duwan oo leh giraan isku midab-midab leh si si fudud loogu garto cabirka;
5. Isku xiraha istaandarka 22 / 15mm wuxuu buuxiyaa shuruudaha ISO;
6. Isticmaal la tuuro si looga fogaado faddarada iskutallaabta
Ka samaysan Phthalates PVC bilaash ah, la tuuri karo
Wuxuu waafaqayaa Dardaaranka Golaha MDD / 93/42 / EEC ee khuseeya Caafimaadka
Maaskarada wejiga la tuuri karo oo qaab ahaan loo saxo.
maaskaro waji loogu talagalay oo loogu talagalay waaxyada suuxinta.
Sidoo kale ku habboon dib-u-kiciyaha iyo codsiyada kale ee ku lug leh daaweynta oksijiinta.
- Kabaro qaabdhismeed aad u jilicsan oo qaabeysan oo awood u siinaya shaabad adag oo leh cadaadiska ugu yar ee la adeegsan karo
–Shoulder xajin ku xirmaan tirada kala duwan ee gacanta
-Kuli cad cad u fiirso fududaanta xaaladda bukaanka
- Waxaa la siiyay giraan midab-ku-xir ah oo si dhakhso leh oo fudud u aqoonsiga cabirka;
- giraanta jillaab si fudud ayaa looga saari karaa haddii aan loo baahnayn
Dhammaan cabbirada waxaa loo keenaa si shaqsi ah oo lagu buuxiyo shaashad hufan, fududahay in la furo bac.
Hore: Iibka kulul Hme filter muruqa iyo nidaamka neefsashada
Xiga: Wareeg Neefsasho La Tuuri Karo